Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Caalamiga ah ee Raadiyaha oo Lagu Qabtay Nairobi ” SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Caalamiga ah ee Raadiyaha oo Lagu Qabtay Nairobi ” SAWIRRO”
Munaasabad balaaran oo uu soo qaban qaabiyay ururka suxufiyiinta qurba-joogta ee dalka Kenya ee (SEJASS) laguna xusayay maalinta caalamiga ee Raadiyaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeyb wariyaasha ku sugan dalka Kenya oo ay ka mid ahaayeen wariyaal mudo ka shaqeynayay saxaafada.
Qaar kamid ah wariyaashii ka soo qeyb galay munaasabadda ayaa ka jeediyay hadalo isugu jiray taariikhda xiligii la aasaasay raadiyaha iyo muhiimada uu raadiyuhu u leeyahay bulshada .
Shukri Maxamuud Afrax oo ka mid ah wariyaasha mudada ku soo dhex jiray saxaafada Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeysay muhiimada uu raadiyuhu u leeyahay bulshada,waxana ay wariyaasha kula dar daarantay in ay mar kasta sheegaaan runta oo ay iska ilaaliyaan beenta.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda loogu xusuyay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha soo xiray gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qurba-joogta ee dalka Kenya (SEJASS) Maxamed Cismaan Xuseen (New york),waxana uu wariyaasha ugu hambalyeyay xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
Ustaad New York ayaa munaasabadda ka sheegay in ururka suxufiyiinta qurba-joogta ee dalka uu tababaro siin doono wariyaasha ku sugan dalka Kenya,si kor loogu qaado xirfadooda saxafinimo.
13-kii bishii November ee sanadkii 2011 ayaa hay’adda qaramada midoobay ee UNESCO waxa ay u aqoonsatay 13-ka bisha February in ay tahay maalinta caalamiga ah ee Raadiyaha,ka dib markii ay soo jeedisay boqortooyada dalka Spain.
Ku Simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha Baarlamanka oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka Todobaadka (Dhageyso+Sawirro)
Ku simaha Madaxweynaha dalka oo maanta soo booqday xarunta Wasaraadda Warfaafinta”SAWIRRO”
Ku simaha Madaxweynaha dalka oo maanta soo booqday xarunta Wasaraadda Warfaafinta"SAWIRRO"